.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Mp3 သီချင်းအသစ်တွေ ဒေါင်းချင်သူများအတွက်
Mp3 သီချင်းအသစ်တွေ ဒေါင်းချင်သူများအတွက်
Mp3 သီချင်းအသစ်လေးတွေ နားထောင်ချင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် သီချင်း Album အသစ်တွေ ထွက်တိုင်း
အမြဲတင်ပေးနေတဲ့ ဆိုဒ်သစ်လေး တစ်ဆိုဒ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အသံကွာလတီကောင်းကောင်းနဲ့ တင်ပေးပြီး
အွန်လိုင်းမှာတင် နားထောင်လို့ ရအောင်လည်း လုပ်ပေးထားပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်ပိုင် Hosting နဲ့ တင်ပေးတာဆိုတော့
ဒေါင်းရတာလည်း တစ်ချက်လေးကလစ်လိုက်ရုံပါပဲ။ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေပါတယ်။ တစ်ချို့ Album တွေဆိုရင်
MTV တွေရောပါ တင်ပေးထားတာ ရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဆိုဒ်လင့်ပေးထားပါတယ်နော်..။
Myanmar Mp3, Myanmar Song and Myanmar Music Video
Mp3 သီချင်းတွေကို လိုင်းပေါ်မှာတင်လည်း နားထောင်လို့ရတယ်။
ဒေါင်းမယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ချက်လေး ကလစ်လိုက်တာနဲ့ ရပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ..
Posted by Thurainlin at 06:57
Labels: Mp3, Mp3 Album, Website